Kuputsa muCommerce nemaresitorendi | Martech Zone
NeChishanu, Nyamavhuvhu 10, 2007 Chitatu, November 30, 2011 Douglas Karr
Vhiki rino raive svondo rangu rekutanga saDirector weTechnology ye Patronpath. Imwe kambani yechidiki tekinoroji, Patronpath yatove nemhedzisiro yakakura muindaneti Kuodha indasitiri.
Kusiyana nemamwe makambani mazhinji, Patronpath akatarisa software yavo zvese paMushandisi Chiitiko uye Kubatanidzwa. Panzvimbo pekugadzira software yemutengi, ivo vari kutarisa mukugadzira software yemushandisi.
Iyo kambani yaita basa risinganzwisisike mukukura uye tekinoroji yakapihwa chokwadi chekuti ivo vanga vasina tekinoroji 'yekuva' iko kunyorera. Ndataura na CEO Mark Gallo nhasi ndikatadza kutaura kushamisika kwandakaita.
Iyo kambani yanga iri nimble, nekukurumidza kugadzirisa bhizinesi ravo munzvimbo idzo maRestoreurs dzinoda ivo zvakanyanya. Chikwata chiripo chinoshamisa. Kuziva kwavo indasitiri ndiko kunoita kuti zvese zvishande uye chii chiri kuvaka kambani hombe.
Tichitarisa kuIndasitiri yeRestaurant, iwe unogona kufunga kuti ini ndiri nzungu yekusvetukira mune ino gigi. Hafu yenzvimbo dzese dzekudyira dzinokundikana uye mubairo webhangi pane avhareji isiri-cheni, yekudyira yemhuri ine hutsinye. Musiyano uripo pakati peresitorendi inobudirira neresitorendi iri kukundikana unogona kutetepa sebvudzi… ndipo panopinda Patronpath. Kuwedzera online kuodha kuresitorendi yekutora uye / kana kuendesa ndizvo zviri kusundira indasitiri kumberi izvozvi.
Hezvino chikonzero nei MaOnders epaInternet anoita mutsauko.
Vanhu vanoraira zvimwe chikafu pavanoraira kutora-uye kuendesa. Funga nezvazvo… paunotora mhuri yako kuresitorendi, unohodha pizza yetafura. Paunoraira kuendesa, iwe unodha zvakakwana zvekudya kwemangwanani kana yekunonoka husiku tudyo, futi!
Vanhu vari kutsvaga nyore nyore uye nekuwedzera. Zvitoro zvekutengesa zviri kuvhara uye maketani eresitorendi ari kukura. Chikonzero chacho chiri nyore, isu tinoda kushandisa yakawanda yemhando nguva nemhuri yedu kupihwa mararamiro edu akabatikana uye nguva shoma yekutenga nekubika. Kana iwe uchikwanisa kuwana chikafu chakanakira mhuri yako uye uchitore uchienda munzira kumba, wadii !? Kudya kunze kunokurumidza… asi kuvhura chikafu uri wega mumba mako kuchiri kubvumidza mhuri kuungana pamwe chete patafura.
Iyo huru online yekuraira system inoderedza kuodha zvikanganiso uye inotora vashoma vashandi zviwanikwa futi! Zvakanyanya kuomarara kukanganisa odha iwe ndiwe uri kuiisa pamwechete, handiti?
Pachine basa rakawanda rekuita, zvakadaro. Iyo Pos masisitimu achiri echinyakare. Famba uchienda muresitorendi yekudyira uye iwe unowana yakasimba POS inomhanya paWindows 95 uye uchishanda kunze kweAccess database! Chokwadi, pane inotonhorera yekubata skrini ... asi iyo indasitiri yakaibva kune akakomba mutambi kuti apinde uye achenese imba.
Pamhepo Ekuraira masisitimu anoita mutsauko. Kushandisa APIs nePOS, Fax, uye Email Kubatanidzwa - vashambadzi vakasununguka kuita zvavanoita zvakanyanya… kutengesa chikafu chakakura kwazvo uye sevhisi uku uchiwedzera mirairo yakawanda uye yakakura! Ndipo patinopinda. Tine mamwe mafomu makuru aunofanira kuona kuti utende. Iyo kambani uye indasitiri yakagadzirira kutora uye isu tichava vakanyanya kunaka!
Muno muIndianapolis, tiri kushandisa software yedu ne Scotty's Brewhouse.
Famba mune chero maScotty uye iwe uchaona ipapo kuti chiitiko ichi chiri chese pamusoro pemushandisi uye uchibatanidza icho nehunyanzvi. Kune imi vateveri veColts, chigaro chega chega paScotty chigaro chepamberi sezvo dumba rega rega riine LCD terevhizheni! Ive neshuwa yekuvatarisa ivo masikati pamwe ... vane yakanaka $ 5 menyu!
Ive neshuwa yekuvaudza iyo Doug kubva Patronpath ndakutuma!
Aug 22, 2007 na10: 33 PM
Ini ndaita mashoma maGoogle apps setups asi chete eemail.
Iyo yekutanga peji chinhu chawakaita chinoita senge chakatsvinda.
Ini ndichafanirwa kuyedza izvo
May 28, 2012 pa 4: 23 PM
Ndakaona mhinduro nyowani inonzi Idya Pamhepo inoita kunge iri
kunyange nekukurumidza uye kurira kupfuura vamwe, wakambozviona here?